HTC ထွက်ခြင်း: အင်္ဂါရပ်များ၊ နည်းပညာစာရွက်နှင့်စျေးနှုန်း Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | HTC က
ယင်းပြီးနောက် စန်း စျေးကွက်၏အဓိကအကျိုးစီးပွားဗဟိုအဖြစ် cryptocurrencies နှင့်၎င်းတို့၏ကျဆင်းမှု၏, HTC ဖုန်းအသစ်တစ်ခုတွင်လောင်းနိုင်သည်Bitcoin သို့မဟုတ် Ethereum ကဲ့သို့သော cryptocurrencies သိုလှောင်ခြင်းကိုအဓိကထားသော။ ဒီဟာနည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်၎င်းကိုအစောပိုင်းကလွှင့်တင်ခဲ့ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းကုမ္ပဏီမျှော်လင့်ထားသည့်အောင်မြင်မှုရှိ၊ မရှိကိုမူမသိရသေးပေ။
ထွက်ပေါက်သည်အဆင့်မြင့်သောဖုန်းဖြစ်သည်Qualcomm ရဲ့စွမ်းအားအရှိဆုံးမိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုများစွာရှိသော်လည်းအံ့အားသင့်စရာကောင်းသောနည်းပညာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်တင်ပြသောအရည်အသွေးများကြောင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပုံရသည်။ HTC က U12 + လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာကစတင်ခဲ့သည်။ ကြည့်ကြရအောင်!
HTC Exodus သည်အဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် cryptocurrencies ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ထိုကတည်းကသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းရန်လုံခြုံပိုက်ဆံအိတ်ကြောင်းပြောအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် ဖုန်းပျောက်သွားရင်သူမှာဆန်းသစ်တဲ့ key recovery system ရှိတယ်.
မိုဘိုင်းဝါကြွားသောစနစ်ကိုခေါ်သည် လူမှုသော့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်သို့သော့ကိုဖြန့်ဝေရန်အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းကအခြားသူများအားကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ခွင့်ပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီမှာအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့အဆက်အသွယ်တွေက passive မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သင်၏သော့များကိုသိမ်းဆည်းရန်သူတို့သည်အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရသည်။ အစီရင်ခံအဖြစ်နှင့်အလှည့်၌, သင်ဥစ္စာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ် EngadgetMobile.
ကွန်ပျူတာသည် virtual operating system နှင့်သီးခြားဖြစ်သော virtual money နှင့် keys များကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်နေရာတစ်ခုကိုပေးသည်။ HTC ကလည်း၎င်းကိုပြောဆိုသည် သင်၏ဒေတာအားလုံးကိုအနာဂတ်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ cryptocurrencies အတွက်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော Zion Wallet ရှိသည်။
1 HTC Exodus ၏ထူးခြားချက်များ
HTC Exodus ၏ထူးခြားချက်များ
ကုမ္ပဏီ၏စမတ်ဖုန်းအသစ် ၆ လက်မထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတွင် QuadHD + resolution ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပုံစံနှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းတွင် notch ၏ဖြစ်နိုင်ချေမရှိခြင်းကိုအကျဉ်းချုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရှေ့မျက်နှာအသွင်အပြင်၏တရားဝင်ဓါတ်ပုံမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပြောရလျှင် Snapdragon 18 သည်စွမ်းအင်အားလုံးအပြင်9GB RAM၊ 845 GB Internal Storage နှင့် ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိပြီး၎င်းကိုဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကင်မရာတွင် 16 နှင့် 12 MP resolution ရှိသောနောက်ကျောဘက်ကင်မရာရှိသည်၎င်းတွင် "အရည်အသွေးမြင့် zoom" ရှိပြီးသဘာဝစွမ်းအားဖြင့် Bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် 8 နှင့် 8 MP တို့၏မျက်နှာစာနှစ်ဆရှိသည်။
အခြားသော့ချက်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ Android 8.1 Oreo ကို operating system အဖြစ်အသုံးပြုထားသည် နောက်ဘက်လက်ဗွေဖတ်စက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် HTC ၏ BoomSound Hi-Fi အသံစနစ်နှင့် USonic ၏ဆူညံသံကိုပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် Edge Sense2သည်နည်းပညာကိုသင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် frame ကိုချုံ့ခြင်း (သို့) လက်ထောက် (activate) ကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတွင် IP68 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တစ်ခုတည်းသော SIM ကဒ်အထောက်အပံ့ရှိသည်။
မျက်နှာပြင် ၆ "QuadHD + (၁၈: ၉)
လုပ်ငန်းစဉ် Qualcomm Snapdragon 845 octa-core 2.6GHz max ။
သိုလှောင်နေရာ 128 GB ကို
ချမ်ဘာ နောက် - 16 နှင့် 12 MP အရည်အသွေးမြင့် zoom ကို / မျက်နှာစာ Bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ 8 နှင့် 8 အမတ်
ဘက်ထရီ 3.500 mAh ဘက်ထရီ
ယခု HTC Exodus သင်၏အတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားဘို့ရရှိနိုင်ပါသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် စျေးနှုန်းအရယူရိုမဟုတ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါ်လာဖြင့်မဟုတ်ဘဲ Bitcoins တွင်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရဖုန်းသည် ၀.၁၅ BTC ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ယူရို ၈၃၀ ခန့်သို့မဟုတ် Ethereums ၄.၇၈ နှင့်ညီမျှသည်။ HTC ၏ Rapid Charger 0.15 နှင့် USonic adaptive headphones များပါ ၀ င်သည်။
မိုဘိုင်း သူတို့ကဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတရားဝင်ဖြန့်ဝေလိမ့်မယ် အမေရိကန်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူ၊ နယူးဇီလန်၊ ယူကေ၊ သြစတြီးယား၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC Exodus - ထိုင်ဝမ် blokchain ဖုန်းအသစ်
ဒီဟယ်လို 2018 အတွက် scariest ဂိမ်းများကို